somali sport -”Aniga iyo taageerayaasha City-ba tebi mayno Balotelli” – Glen Johnson -somali-football-soccer SONNA.NET
There are currently 1 user and 1388 guests online. Live Tvs
”Aniga iyo taageerayaasha City-ba tebi mayno Balotelli” – Glen Johnson
Submitted by SONNA on Sun, 02/03/2013 - 13:57
(Manchester) 03 Feb 2013 Dadabka kooxda Liverpool ee Glen Johnson ayaa weerar qaacis ah ku qaaday qanaaskii hore ee kooxda Manchester City ee Mario Balotelli.
Johnson ayaa maanta wajahaya kooxda City taasoo ah tii ugu horeeysay oo uu la ciyaarayo kooxdaasi oo Balotelli la’aan ah iyadoo ay jiraan qaar ka tirsan taageerayaasha City oo jeclaan lahaa inuu sii joogo laacibkan dabciga kulul.
Balse kuwaas iyo Johnson laba jiho ayay kala joogaan: “Ilama aha inay tebi doonaan Balotelli. Anigu meel ugama dhacayo xushmada ninkan, balse qof kastaahi wuu ogyahay wuxuu ahaa.” ayuu ku bilaabay.
“Isla maanta wuxuu noqon karaa xidig wayn….Balse City waxay sidoo kale leedahay xidigo waawayn oo in badan dhaliya goolal ka badan kuwii uu u dhalin jiray.”
Johnson, oo 28 jir ah, ayaa sidoo kale Balo ku wajahay koobkii Euro 2012 kulankii rubuc-dhamaadka: “Kulligeen iimo waan leenahay balse iska daaya Mario kooxdiisa haku dhibo roosooyin bilaa micne ah iyo waxyaabahaas oo kale. Waa xidig wayn balse shakhsiyan kolleey anigu ma tabayo, waayo wuxuu ku caan baxay waxyaabaha uu ka sameeyo garoonka banaankiisa halkii uu garoonka gudihiisa ka sameeyn lahaa.” ayuu ku dooday Glen.
Last Post RT @janethanderson: Captured by #dutch navy #somali pirates convicted #un court in #seychelles longing to escape rice & tuna diet http://t.… 05/19/2013 - 11:31 RT @Spartexy: Sth guyr doesnt knw abt me is that i am a #somali 05/19/2013 - 11:31 RT @MareejoXaamud: #IGAD delegation meeting anti Ras Kamboni politicans & elders, including Barre Hiiraale.- http://t.co/xnCrjtGIjp #Somali… 05/19/2013 - 11:31 RT @MareejoXaamud: #IGAD delegation meeting anti Ras Kamboni politicans & elders, including Barre Hiiraale.- http://t.co/xnCrjtGIjp #Somali… 05/19/2013 - 11:31 @Ephy96 I disagree, the #oriental and #somali ones are the most boog ones trust 05/19/2013 - 11:31 RT @danz_the_boxer: @Ephy96 I disagree, the #oriental and #somali ones are the most boog ones trust 05/19/2013 - 11:31 RT @delinfielkar: #Swedish Leftist journalists did not stand by brave #Somali reporter
when she reported on terrorism #AlShabab #Islam
htt… 05/19/2013 - 10:30 RT @delinfielkar: #Swedish Leftist journalists did not stand by brave #Somali reporter
htt… 05/19/2013 - 10:30 1